Ngena ngemvume noma Joyina uhlelo
Izinhlangano ezifana neyakho zisebenzisa i-Google yeZingenzi-nzuzo ngezindlela ezijabulisayo, engalindelekile nesebenzayo. Bona ukuthi lezo ezingenzi-nzuzo zikhulisa kanjani ukufinyelela namandla wazo nsuku zonke.
Funda kabanzi mayelana nalezi ezingenzi-nzuzo nokuthi zisebenzisa kanjani ubuchwepheshe ukuze zisekele izinjongo zazo
Injongo: Ukuguqula ukuphila kwabantu abampofu nababandlululwayo kakhulu ngokuthuthukisa ukuthola amanzi ahlanzekile, ukukhucululwa kwendle nenhlanzeko.Sisebenzisana nozakwethu, siye sakwazi ukusiza abantu abayizigidi ezingu-2 ukuze bathole amanzi ahlanzekile bese kuthi izigidi ezingu-3 zithole ukukhucululwa kwendle ngonyaka odlule.
Imikhiqizo: I-YouTube, i-Google AdWords, i-Google Analytics, i-Google Earth, Google Amamephu
Isithombe nge-Direct Relief International
I-Direct Relief International
Injongo: Ukuthuthukisa impilo nokuphila kwabantu abampofu noma abasezimweni eziphuthumayo ngokuhlinzeka ngezinsiza zokwelapha ezibalulekile ezidingekayo ukubanakekela. Izinhlelo zokusiza ze-Direct Relief zenzelwe izimo nezidingo ezithize zalabo ababhekene nemiphumela yezinhlekelele ezingokwemvelo noma ezibangelwa abantu. Lo msebenzi uqhutshwa ngokubambisana nezinhlangano zendawo, futhi wenziwa ngeminikelo yokubalulekile neyezimali kusuka ebantwini ngabanye, kwizinkampani zokunakekela ezempilo, nabakhiqizi bezokwelapha.
Imikhiqizo: I-Google AdWords, i-Google Analytics, Google Amamephu, i-YouTube
Injongo: Siletha umsebenzi onesithunzi, osekelwe kwikhompuyutha kwabesifazane, intsha, nakubabaleki abampofu.
Imikhiqizo: I-Google AdWords, Izinhlelo Zokusebenza ze-Google
Isithombe nge-Anaheim Ballet
Injongo: Ukucacisa nokujabulisa izethameli ngezinhlelo ezingokwakudala nephrezentheshini yesimanje. I-Anaheim Ballet ihlinzeka ngokusebenza okuyikhwalithi kuzethameli ze-balletomanes nabahambeli be-novice ballet kanye nezenzo ezifana nesisithelo kubaculi abanekhono base-Southern California futhi njengozibuthe kumathalenta asemazweni angaphandle.
Isithombe nge-Chief Almir ne-Surui Tribe
I-Chief Almir ne-Surui Tribe
Injongo: Ukwenza imephu nge-Google Earth ukulondoloza imvula nendlela yokuphila.
Imikhiqizo I-Google Earth, i-YouTube
Injongo: Izitimela ZOKUFAKAZA nokusekela abashoshovu, nezakhamuzi emhlabeni wonke ukuze basebenzise ividiyo ngokuphephile, ngezimiso ezinhle, futhi nangendlela efanele ukuze kudalulwe ukuhlukunyezwa kwamalungelo abantu nokulwela ushintsho kumalungelo abantu.
Imikhiqizo: Izinhlelo Zokusebenza ze-Google, i-YouTube
Injongo: I-UNICEF igunyazwe i-United Nations General Assembly ukusekela nokuvikela amalungelo ezingane, ukusiza ukuhlangabezana nezidingo zazo eziyinhloko nokwandisa amathuba azo wokufinyelela ngokugcwele amakhono azo.
Imikhiqizo: Izinhlelo Zokusebenza ze-Google
Isithombe nge-Navigators USA
Injongo: Ukwenza izingane nemindeni bachithe isikhathi nemvelo ngokusebenzisa inhlangano ebandakanya wonke umuntu.
Isithombe nge-2015 Ama-olimpikhi wabakhubazekile wamageyimu omhlaba
2015 Amageyimu Omhlaba ama-Olimpikhi Abakhubazekile
Injongo: Ngamandla wezemidlalo, i-Special Olympics ilwela ukudala umhlaba ongcono kakhulu ngokukhuthaza ukwamukela nokuhlanganisa wonke amakhono.
Imikhiqizo ye-Google: Izinhlelo Zokusebenza ze-Google, i-Google Ad Grants, i-Google Analytics, i-YouTube yeZingenzi-nzuzo
Joyina umphakathi wethu we-Google+
Thola ukukhuselwa. Yabelana ngezifundo. Thola izibuyekezo. Landela i-Google yeZingenzi-nzuzo ku-Google+ ngokusingeza kumibuthano yakho.
singeze kumibuthano yakho
Shintsha ulimi noma isifunda: Afrikaans – Suid-Afrika Bahasa Indonesia – Indonesia Bahasa Melayu – Malaysia Čeština – Česká republika Dansk – Danmark Deutsch – Deutschland Deutsch – Luxemburg Deutsch – Luxemburg Deutsch – Österreich Deutsch – Schweiz Deutsch – Schweiz English English – Australia English – Canada English – Hong Kong English – India English – Ireland English – New Zealand English – Philippines English – Philippines English – Singapore English – United Kingdom Español – España Español (Latinoamérica) – Chile Español (Latinoamérica) – México Français Français – Belgique Français – Canada Français – Luxembourg Français – Suisse Isizulu – iNingizimu Afrika Italiano – Italia Italiano – Svizzera Magyar – Magyarország Nederlands – België Nederlands – België Nederlands – Nederland Norsk – Norge Polski – Polska Português (Brasil) – Brasil Română – România Slovenčina – Slovensko Slovenščina – Slovenija Suomi – Suomi Svenska – Sverige Tiếng Việt – Việt Nam Български – България Русский – Россия ‫עברית – ישראל‬ हिन्दी – भारत ไทย – ไทย 中文（简体中文） 中文（简体中文） – 新加坡 中文（繁體中文） – 台灣 中文（繁體中文） – 香港 日本語 – 日本